Ciidamo si awood ah u xirtay mid kamid ah wadooyinka Muqdisho - Awdinle Online
Ciidamo si awood ah u xirtay mid kamid ah wadooyinka Muqdisho
Ciidamo ka tirsan kuwa Nabadsugida hubeysan oo mushaar la’aan ka gadoodsan ayaa xirtay wadooyinka soo gala taalada daljirka Daahsoon oo ku taalla degmada Boondheere ee Gobolkan Banaadir.
Qaar kamid ah Ciidamada oo Warbaahinta la hadlay ayaa waxaa ay sheegeen in ay ku jireen Xero ciidan oo ku taalla Garoonak Diyaaradaha degmada Deeyniile, isla markaana muddo Saddex bilood ah aysan qaadan wax mushaar ah.
Waxaa ay sheegeen in cabashada dhanka mushaaradka ah ay u gudbiyeen Saraakiisha ka sareysa, hayeeshee ay ugu jawaabeen in aysan u heyn wax xaqquuq ah, isla markaana meesha ay ku kala tagaan.
Ciidamadaan gaooday oo tiro ahaan sheegay inay dhan yihiin 90 askari ayaa waxaa muddo ku dhawaad saacad kadib u yimid saraakiil ka tirsan Ciidamada Dowladda, iyada oo ugu dambeyn ay dib u fureen isku socodkada dadka iyo Gaadiidka ee wadooyinka soo gala taalada daljirka Daahsoon.
Previous articleGuddoomiyaha Gobolka Sh/Hoose oo kasoo horjeestay Go’aan kasoo baxay Maamulka G/Banaadir
Next articleDuqa Muqdisho oo u digay dadka dhul boobka wada